News Collection: मानिसहरू सेक्सका बारेमा किन यति धेरै चासो दिन्छन् ?
मानिसहरू सेक्सका बारेमा किन यति धेरै चासो दिन्छन् ?
सेक्स भन्ने कुरा हरेक प्राणीलाई अत्यावश्यक कुरा भएकाले पनि मानिसहरूले यो विषयप्रति बढी चासो दिएको हुनसक्छ।
सुलेमान शंकर 'इकु', हास्यकलाकार
हामी सबैको शारीरिक आवश्यकताको कुरा भएकाले हो कि !
शुभेच्छा थापा, नायिका
सेक्सबिनाको जीवन कल्पनासमेत गर्न मिल्दैन। यसका लागि नै संसार चलेको छ अनि कसैसँग आकर्षण हुनु नै कसैसँग सेक्स अपिल हुनु हो। स्वस्थ जीवन जिउन पनि सेक्स आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सेक्सका बारेमा धेरै कुरा हुन्छ।
सुरज रानाभाट, मोडल
सेक्स भनेको प्राकृतिक देन हो। सबै प्राणीलाई यसको आवश्यकता पर्छ। परापूर्व कालदेखि नै सेक्सलाई लुकाएर गर्नुपर्ने कार्यका रूपमा राखियो। त्यही भएर मानिस बढी सेक्सप्रति लिप्त भयो। यदि परापूर्व कालमा नै सेक्सको ठाउँमा भात खाने कार्यलाई लुकाएर राखिएको भए शायद आज सेक्सचाहिं सबैले देख्ने गरी गरिन्थ्यो होला। त्यस्तो भएको भए आज मानिसहरू सेक्सका लागि होइन भातका लागि बढी चासो दिन्थे कि ?
अमृत मरहट्ठा, मेकअप आर्टिष्ट
हरेक जीवित तर वयष्क प्राणीहरूलाई नभैनहुने एउटा प्राकृतिक कुरा भएकाले नै मासिनहरू सेक्समा बढी चासो दिन्छन्।
सविना कार्की, नायिका